PressReader - Ilanga: 2017-10-05 - Ungadikibaliswa wukuchithwa kwesicelo somsebenzi LUCKY CAIN
Ungadikibaliswa wukuchithwa kwesicelo somsebenzi LUCKY CAIN
Ilanga - 2017-10-05 - Relationships & Love Issues - Olunye ulwazi lucashunwe kwidestinyconnect.com lucky.cain@ilanganews.co.za
ESIKHATHINI samanje impilo inzima kubantu abaningi namathuba omsebenzi ayamfimfa. Ukungasebenzi kwehlisa ukuzethemba ebantwini abaningi kangangokuba nogqozi lokufaka izicelo zomsebenzi luya ngokwehla kwabanye uma njalo beba nebhadi lokuchithwa.
Kubuhlungu ukuchithwa kwesicelo sakho somsebenzi osuke usifakile ngoba kwesinye isikhathi usuke ubeke ithemba lakho lonke, uzitshela ukuthi nakanjani uzowuthola.
Ngokocwaningo kuthiwa zikhona izindlela ongalungisa ngazo amaphutha angenza ukuba isicelo sakho somsebenzi sichithwe.
Okokuqala okumele ukubeke emqondweni uma isicelo sakho somsebenzi sichithiwe, wukuthi baningi aseke bahlangabezana nesimo esifana nalesi. Ngakho ungadikibali, thatha lokhu njengesifundo bese uqhubeka nokufaka izicelo kwezinye izinkampani.
Kungenzeka ukuthi kawuchithwanga ngoba isicelo sakho sibheda kodwa bekukhona omunye obenesicelo esingcono kunesakho.
Ngaphandle kokuba neziqu eziwufanele lowo msebenzi, kuningi nokunye okumele uqinisekise ukuthi kuyahambisana nomsebenzi owufunayo okubalwa kukhona isipiliyoni, izincwadi zokushayela kanti nezinkampani osuke wazisebenzela phambilini ziyaba nomthelela.
Kuyiqiniso elingephikwe ukuthi kwesinye isikhathi nabo labo abaneziqu nesipiliyoni esifanele bayahlangabezana nesimo sokuchithwa kwezicelo zabo zokufuna umsebenzi. Ngakho ungathathi ukuchithwa njengokuthi sekuphelile ngawe noma kunokuthile okungahambi kahle kuwena.
Kungenzeka ukuthi kukhona obefake isicelo ongcono ngesipiliyoni noma ngokuthile kunawe. Hlala usethembeni lokuthi ngelinye ilanga sizophumelela isicelo sakho. Kuyenzeka futhi isicelo sakho sichithwe ngoba abaqashi bebona ukuthi unesipiliyoni esiningi ngokwedlulele, mhlawumbe futhi ufunde ngokwedlulele, bese bebona ukuthi ngeke bakwazi ukukuholela imali ekufanele.
Kubuhlungu ukubona abantu abasha abaneziqu belibeka ngembaba elokuthi sebeliphonsile ithawula, kabasenalo ithemba lokuthi bayowuthola umsebenzi ngelinye ilanga.
Kuyenzeka umuntu abhekane nengcindezi yokuthi ozakwenu obufunda nabo sebeyasebenza kodwa wena usehla wenyuka ufakana nezicelo zomsebenzi. Ungayivumeli le ngcindezi ikubuse ngoba ingakwenza ugcine usuyisibotho.
Ongoti bathi ungalilahli ithemba futhi ungagcini ngokufaka izicelo zemikhakha oyifundele kuphela kodwa kufanele ubheke neminye ehambisana neziqu zemfundo onazo.
Kuyenzeka uqashelwe okunye ngaphakathi kodwa ngenxa yeziqu nesipiliyoni sakho, ugcine usuwenza okunye. Kungakusiza ukuba uxhumane nabantu abasebenza emkhakheni wakwaHuman Resources ukuze bakusize ngezindlela zokufaka isicelo somsebenzi noma zokulungisa i- curriculum vitae (CV).
Ungakwazi ukubuza nakuyona inkampani ekuchithile ngezizathu eziholele esinqumeni sayo. Ungayizondi futhi ungayilwisi ngesinqumo sayo kodwa thola isizathu bese uyalungisa lapho kumele ulungise khona ngaphambi kokuba udlulele phambili.
Ukufaka isicelo somsebenzi akukhona okwabantu abangasebenzi kuphela kodwa nalabo abasebenzayo banelungelo lokuthuthuka emikhakheni yabo. Sikufisela inhlanhla, qhubeka nokufaka izicelo ungadikibali.
ISITHOMBE NGABE: RESUME.COM
UMA sichithwa isicelo sakho somsebenzi kungakuhle ubuzisise isizathu ukuze ukwazi ukulungisa amaphutha.